Maxaa ka jira in Col. Gadhafi asalkiisu yahay Yuhuud (Warbixi dhinacyo badan) – SBC
Maxaa ka jira in Col. Gadhafi asalkiisu yahay Yuhuud (Warbixi dhinacyo badan)
Sheekooyinka & wararka had iyo goor la isla dhexmaro waxay keenaan su’aalo badan oo ku aadan waxa ka jira run ahaanshaha arimahaasi tiiyoo ay ku nigaxantahay mala awaalka iyo xaqaa’iqa dhacdo kasta ay la soo baxdo.
Taariikhda iyo asalka sinjida hogaamiyaha wadanka Liibiya Col. Moammar Gadhafi ayaa mudo fara badan wuxuu ka taagnaa muran iyo nux nux hoose iyadoo dad badan oo taariikhyahano ah ay siyaabo kala duwan uga hadleen taariikhdiisa waxaase haatan dib u soo cusboonaysiiyey sheekadaasi xaaladaha siyaasadeed ee ka aloosan wadanka Liibiya iyadoo dagaalka macangagnimada ah ee Col. Moammar Gadhafi uu la soo baxay ay keentey in la eego taariikhada dhalashadiisa.
Wargeyska American Online qaybtiisa Internet-ka maqaal dheer oo ay ku qortey gabadha lagu magacaabo Danna Kennedy waxay kaga hadashay arimo fara badan oo la xiriira muranka sinjiyada Col. Gadhafi iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in uu ka soo jeedo Yuhuuda ama Isra’il waxaa kaloo jira warar sheegaya in uu dhalay askari Talyaani ah oo ka mid ahaa ciidamadii Talyaaniga ee guumaysiga ku qabsadey Liibiya horaantii qarnihii 20-aad.
Dad badan oo Liibiyaan ah oo qaarkood ay yihiin aqoonyahano ayaa mudo sii horeysay waxay sheegeen in Col. Gadhafi uu yahay nin asalkiisu yahay Yuhuud waxaa kaloo jira waar sheegaya in hooyadiis ay tahay Yuhuud.
Col. Moammar Gadhafi qudhiisa wareysi lala yeeshay sanadkii Sanadkii 1973 wareysi uu siiyey wargeys ka soo baxa gudaha wadanka Liibiya oo lagu magacabo Al Blagh wuuxu ku qiray in habaryaharihiis qaarkood ay leeyihin taariikh sinji oo Yuhuud ah wuxuu sheegay in mid ka mid ah habaryarihiis ay dhashay naag Yuhuud ah waxaana haweenaydaasi oo goor dambe dhimatey la sheegay in ay aad ugu ekeyd Col. Gadhafi ay yihiin laakiin wareysigaasi oo Col. Gadhafi lala yeeshay waxaa laga saaray intii xusaysay jinsiyada habaryartiis ee Yuhuudnimada sida uu sheegay saxafi Al Blagh oo wareysi lala yeeshay sanadkii 1980-kii.
Wariye ka tirsan Tv-ga laga leeyahay Mareykanka oo lagu magacaabo Richard Engel oo ka soo hadlayey gudaha wadanka Liibiya dhawaan wuxuu siidaayey war xigasho ahaa oo ka soo xigtey shan nin oo ka mid ah mucaaradka Col. Gadhaafi kuwaasi oo sheegay in Gadhafi uu yahay Yuhuud.
Warka iska soo horjeeda ee ku aadan sinjiyada Col. Gadaafi ee ku aadan in uu asal ku leeyahay Yuhuuda waxay aheyd mid soo taxneyd ilaa iyo sanakdii 1970-kii xiligaasi oo aheyd laba sano ka dib markii Gadhafi uu xukunka ku qabsadey afgambi military.
laakiin Col. Gadhaafi wuxu ku sheegaa taariikhdiisa in uu ku dhashay teendho ku taal magaalada Sirta wadanka Liibiya isagoo sheega in uu ka soo jeedo qabiilka Bedouin isaga iyo waliba xaaskiisa
Dad badan oo taariikhyahano ah oo u dhashay Liibiya badankoodu waxay sheegeen isla markaana ku xuseen buugaag dhanka taariikhda ah iyagoo ku sheegay in Gadhafi hooyadiis iaydoo 9 sano jir ah ay gashay madhabta Judaism ee Yuhuuda, haweenay kale oo Ayeeyo u aheyd ayaa iyana la sheegay inay aheyd Yuhuudiyad laakiin waxay ka tagtey ninkeeda iyadoo guursatey nin Carab ah oo Shiiq ahaa.
Inkastoo taariikhyahanadu sidaasi qorayaan hadana waxaa caadi iska aheyd in hogaamiyeyaasha Carabta cid kasta oo ka soo horjeeda nidaamoodka xukunkooda ay ku tilmaamaan inay sinji ku leeyihiin Isra’il.
Laakiin culimo fara badan iyo siyaasiyiin qibrad leh oo ay wareysatey American Online waxay baneeyeen halkii ay ku qori laheeyeen faahfaahin dheeraad ah oo la xiriirta nolashii hore ee yaraantii Gadhafi iyo waliab sinjigiisa.
Mohamed El-Jahmi oo ah nin u dhashay Liibiya balse wadankaasi isaga cararay 30 sano ka hor isla markaana qaatey dhalashada Mareykanka wuxuu sheegay inaanay muhiim aheyn xiligan in la isku mushquuliyo sinjiga Gadhaafi laakiin wuxuu xusey in ay aheyd wax iska soo taxnaa oo nux nux hoose iyo xan aheyd muranka ku aadan asaliyada Gadhafi iyo halka uu ka soo jeedo.
“Anigu hada waxaan doorbiyaa inaan ka hadlin arinkaasi, wax weyna ma ahan hadii uu yahay Yuhuud ama aanu aheyn, laakiin waxaa muhiim ah in uu yahay Sheydaan loona baahan yahay in uu ka dego talada Liibiya” ayuu yiri Mohamed El-Jahmi.
Mohamed Yusuf al Magariaf oo 71 isla markaana ah xubin ka mid ah Mucaaradka Gadhafi oo degan dalka Mareykanka wuxuu sheegay in buugag badan oo Gadhafi qoray uu si weyn ugu beensheegay dadkiisa halka uu ka soo jeedo.
Sanadkii la soo dhaafay Telefishin laga leeyahay Isra’il oo lagu magacaabo Channel 2 wuxuu wareysi la yeeshay laba haween ah Yuhuud ah oo asalkoodu ka soo jeedo Liibiya waxay sheegteen inay yihiin qaraabada Yuhuuda ee Col. Gadhafi.
Gabar wariye ah oo lagu magacaabo Mary Pace buug ay qortey oo lagu magacaabo “Sirta Gadhafi” waxay ku xustey buugeeda in Gadhafi looga shakisan yahay in uu yahay Catholic waayo ayay ku tiri buugeeda waxaa dhalay askari Talyaani ah oo uur u yeelay gabar Liibiyaan ah ka dibna askarigii wiilkii yaraa oo loola jeedo Gadhafi waxaa loo qaaday magaalada Venice eek u taal waqooyiga Talyaaniga halkaasi oo kaniisad lagu geeyey isagoo 8 ama 9 bilood jir ah.
Sanadkii 1980-kii saxafiyad Talyaani ah ayaa isku dayey in uu la xiriirto kaniisada Vatican-ka si ay wax uga ogaato arimaha la xiriira sinjiga Gadhafi ee la xiriirinaya Catholic laakiin waxaa loo sheegay in uu isaga fogaato arinkaasi iyadoo heshay digniino dhimasho, gabadhaasi saxafiyada ah waxaa la sheegay inay dalbatey inaan la ogaan qofka ay tahay.